Ugwetshwe iminyaka engu-20 ebhadla ejele udokotela mbumbulu | isiZulu
Ugwetshwe iminyaka engu-20 ebhadla ejele udokotela mbumbulu
Ugwetshwe iminyaka engu-20 udokotela owahlinza iziguli wazishiya zikhubazekile
UGraca Machel uhlela ukuthathela udokotela kaMandela izinyathelo zomthetho
Kuboshwe udokotela wezingane ngezinsolo zokunukubeza ngokocansi
Mahikeng – Ugwetshwe iminyaka engu-20 ebhadla ejele udokotela mbumbulu owayesoka abantu ekhipha nemithi, ngemuva kokulahlwa ngamacala angu-4 523 okukhwabanisa yiNkantolo kaMantshi eRustenburg ngoLwesine.
Bekungekhona okokuqala elahlwa yicala lokuzenza udokotela.
NgoJanuwari 2010, uJames Mogaswa Mathopa, 47, walahlwa yicala lokukhwabanisa ngokwenza into efanayo eBloemfontein.
Wanikwa isigwebo seminyaka enithathu ebhadla ejele kungenjalo akhokhe inhlawulo ka-R20 000.
Ngemuva kwenyanga elahlwe yicala, waqhubeka nomsebenzi wakhe ngemuva kokuthuthela eNorth West.
OLUNYE UDABA: Owesifazane,51, ongaboni kahle uphase uMatric
Lo dokotela mbumbulu wayehlola iziguli, azitshele ukuthi ziphethwe yini, bese ezidlulisela kodokotela balezo zifo, wayephinde asoke abantu besilisa akhiphe nemithi ngo-R280, kusho okhulumela amaphoyisa aseNoth West uCaptain Tlangelani Rikhotso esitatimendeni.
OKlebe babopha uMathopa ngoMashi 4, 2016 ngemuva kwesimangalo sokuthi wenza imisebenzi yobudokotela engenazo iziqu, kusho uRikhotso.
IHealth Professions Council of South Africa (HPCSA) yenza uphenyo, yakuqinisekisa ukuthi akayena udokotela obhaliswe ngaphansi kwayo.
Emizuzwini eyi-30 edlule